ဤအကြံပြုချက်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ကိန်းဂဏာန်းများပေါ်တွင် ထားရှိခြင်းသည် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မင်းလောင်း။ လွှဲပြောင်းပေးသည့် spammer များသည် သင့်ဆိုဒ်သို့ အမှန်တကယ်ပင် မရောက်သေးသောကြောင့် ၎င်းအတွက် မှန်ကန်သောအဖြေကို ကျွန်ုပ်တို့ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပါသည်။
ရည်ညွှန်းသူ စပမ်းအကူအညီ (@RefSpamHelp)
ရည်ညွှန်းသူစပမ်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါသည်။ ဝဘ်ပေါ်ရှိ "ဖြေရှင်းချက်" အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ စမ်းကြည့်ခဲ့သည် - btw htaccess-manipulaton သည် တစ္ဆေရည်ညွှန်းသူများထံမှ မကာကွယ်နိုင်ဘဲ - GA တွင် စစ်ထုတ်မှုများကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကာ အချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်- http://www.referrer-spam.help ...
တစ္ဆေ ညွှန်းဆိုသူများသည် အသာစီးရနေသည့် ကစားသမားများ ဖြစ်လာပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝဘ်ဆိုက်ရှိ အကြံဉာဏ်များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပါသည်။ သင်ပံ့ပိုးပေးနေသည့် အကူအညီအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဤအရာအတွက် သင့်အကူအညီအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်းလောင်း။ ဤလူရှုပ်များအသုံးပြုနေသည့် တစ္ဆေလွှဲပြောင်းရေးနည်းလမ်းအသစ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြံဉာဏ်ကို သိသိသာသာ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပါသည်။
ဤနေရာတွင် အကူအညီကောင်းတစ်ခု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အခုပဲ bounce rate အပြောင်းအလဲကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်လိုက်ပါ။
Google Analytics အတွက် အပိုင်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးရန် အကြံဉာဏ်ကို ကျွန်ုပ် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဒါမှ သက်ရောက်မှုကို ချက်ချင်းမြင်နိုင်မှာပါ။
သြဂုတ်လ5ရက် 2015 ခုနှစ် 4:21 နာရီ
၎င်းသည် စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသော ရေစီးကြောင်း/ရေအောက် စပမ်းပြဿနာများဖြစ်သည်- spammers များက ၎င်းကို spam လုပ်ပြီး ကုထုံးကို ပေးသည် – အဲဒါကတော့ ကျွန်တော် ခန့်မှန်းချက်ပါပဲ။
IP ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကိုရှာဖွေရန် အပိုင်းအခြားရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီးပြီလား။
သူများတွေ စမ်းသုံးဖူးလား စမ်းကြည့်တာ တခြား စိတ်ကူးတွေ ၊
1) လည်ပတ်မှုအဖြစ် အချိန်ပိုကြာအောင် ကွတ်ကီးကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘော့တ်တွေက ဆိုက်ကို pinging လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များကို ထုတ်ယူနည်းကြောင့် ဤအရာများကို DDoS တိုက်ခိုက်မှုများအဖြစ် သဘောထားရန် လိုအပ်သည်။
2) ပရိုဖိုင်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပြီး ကုဒ်အသစ်ကို Google Tag Manager တွင်ထည့်ထားခြင်းဖြင့် ကုဒ်ကို ဖြတ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ထို့အပြင်၊ အကောင့်အသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပရိုဖိုင်4ခုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် နောက်ဆုံးနံပါတ်သည် -1 တွင်မဆုံးနိုင်သောအချက်မှာ အခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဤအချက်တွင် spammers များသည် UA နံပါတ်များကို အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် UA နံပါတ်များအားလုံးကို လျစ်လျူရှုပြီး campaign url builder tool ကိုအသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ခန့်မှန်းပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ လမ်းညွှန်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး သင့်ဆိုက်အတွက် htaccess ဖိုင်ကို ဖန်တီးပေးသည့် အခမဲ့ tool တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် အခမဲ့ဖြစ်သည်။ http://refererspamtool.boyddigital.co.uk/ သွားပေးပါ။
သြဂုတ်လ 14 ရက် 2015 ခုနှစ် 10:20 နာရီ
Colin၊ ဒါက အရမ်းကောင်းတဲ့ tool တစ်ခုပါ။ အဲဒါကို ပို့စ်မှာ ထည့်လိုက်မယ်။
တကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်…. ဤစပမ်းအသွားအလာအမျိုးအစားသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် ရှုပ်ယှက်ခတ်နေသော အစီရင်ခံစာများအတွက် နံပါတ်တစ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများအား ဝဘ်ဆိုက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမှန်တကယ်ပြသရန် အထောက်အကူမပြုပါ။
ဇန်နဝါရီလ 1 ရက် 2016 ခုနှစ် ညနေ 12 နာရီ 55 မိနစ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ဝဘ်ဆိုဒ်သည် spam များနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီး adsense သည် ကျွန်ုပ်အား ပိတ်ပင်ထားသည်။
ဇန်နဝါရီလ3ရက် 2016 ခုနှစ် ညနေ6နာရီ 10 မိနစ်
Spam သည် ယနေ့ခေတ်တွင် ပြဿနာကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာနေသည်။ သို့သော်လည်း၊ ဤပို့စ်သည် သင့်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် သင့်ဆိုဒ်ကို အမှန်တကယ် spam လုပ်နေသူများအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် Google Analytics ကို အတုခိုးနေကြသည်။ ၎င်းသည် သင့် Adsense ကို လုံးဝမထိခိုက်စေသင့်ဘဲ သင်၏ Google Analytics ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။
ဒီ spam တွေကို ငါတကယ်စိတ်ကုန်တယ်။ ကူညီပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါလည်း ဒီလိုပဲ။ ဒါကို Google က ဖြေရှင်းချက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ မယုံနိုင်ဘူး။
ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ အတိတ်တွင် ဤအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာအချို့ရှိခဲ့ပြီး လူအများစုမှာ ယင်းသည် ဆက်သွားနေမည်ကိုပင် မသိလိုက်ပုံရသည်။
ကျေဇူးတင်ပါတယ် သဘောတူပါတယ်...တကယ်တော့ ငါဘာဖြစ်နေမှန်းကို မသိခဲ့တာကြာပြီ၊
Douglas ဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် spam များကို လုံးဝမုန်းတီးသည်၊ ၎င်းသည် ယခင်က ကျွန်ုပ်၏ဝဘ်ဆိုဒ်များအတွက် ပြဿနာများစွာကို ဖြစ်စေခဲ့ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်၏ wordpress ဗားရှင်းဟောင်းတွင် မကြာခဏ ကျွန်ုပ်၏ wordpress ဆိုဒ်များကို ပျက်စီးစေပါသည်။
ဤဆောင်းပါးကို ကျွန်ုပ်၏ site တွင် သေချာပေါက် မျှဝေပါမည်။
ကျွန်ုပ်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက် wordpress ဘလော့ဂ်ကို လောလောဆယ် စတင်နေပါသည်။
မင်္ဂလာပါ Douglas .. ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် com.google.android.googlequicksearchbox / .com မှ လည်ပတ်မှုအနည်းငယ်ကို ရရှိပါသည်။
၎င်းတွင် spam ပါဝင်ပါသလား။ မင်းအဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ Fauzy၊ ၎င်းသည် တရားဝင် လွှဲပြောင်းပေးသူဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ Google Android မိုဘိုင်းအက်ပ်.
တစ္ဆေရည်ညွှန်းမှု အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သနည်း၊ ဤစပမ်းမာများသည် ၎င်းထံမှ အဘယ်အရာရသနည်း။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် တကယ့်ကို စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ တစ်ခုတည်းသောအကျိုးအမြတ်မှာ ရှုပ်ထွေးမှုနည်းသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်အသုံးပြုသူများသည် ရည်ညွှန်းသူကိုရှာဖွေမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသိပညာနည်းသော ဆိုက်ပိုင်ရှင်များကို လှည့်စားရန် အလွန်စျေးပေါပြီး ရယ်စရာကောင်းသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။